Mar dambe, soo dejinta iyo dhoofinta birta dalkayga ayaa laga yaabaa inay muujiso qaab "laba-laab sarreeya" - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Mar dambe, soo dejinta iyo dhoofinta birta dalkayga ayaa laga yaabaa inay muujiso qaab "laba jibaar sare" ah
Sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay ee Maamulka Guud ee Kastamyada, dalkaygu wuxuu dhoofiyay 7.542 milyan tan oo bir ah bishii Maarso, koror sanad-sannadeed ah 16.5%; oo la soo dhoofiyay 1.322 milyan oo tan oo bir ah, koror sanad-sannadeed ah 16.3%. Saddexda bilood ee ugu horreeya, dalkaygu wuxuu dhoofiyey 17.682 milyan oo tan oo ah badeecado bir ah, koror sanad-sannadeed ah oo ah 23.8%; soo dejinta waxsoosaarka biraha waxay ahaayeen 3.718 milyan tan, koror sanad-sannadeed ah 17.0%.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee khuseeya ayaa ah in dhoofinta birta ee dalkeyga bishii Maarso ay kordhisay 2.658 milyan tan marka la barbar dhigo bishii Febraayo, kororka 54.4%, taasoo dejineysa bille sare oo cusub oo dhoofinta biraha ah tan iyo bishii Abriil 2017.
Aragtida qoraaga, dib u helida dhoofinta birta dalkayga, biraha la soo dhoofiyo iyo kuwa la dhoofiyo ayaa laga yaabaa inay muujiyaan qaab "laba-laab sareeya" muddada dambe. "Kan ugu sarreeya ee ugu sarreeya" wuxuu ka muuqanayaa mugga: wadarta guud ee soo dejinta birta iyo dhoofinta waxay ku sii jiri doontaa heer sare; "kan labaad ee ugu sarreeya" wuxuu ka muuqdaa heerka kobaca, iyo soo dejinta birta iyo dhoofinta waxay ilaalin doontaa heerka kobaca ee aadka u sarreeya sanadka oo dhan. Sababaha ugu waaweyn waa sida soo socota:
Marka hore, asalka asalka sare ee kaarboonka iyo dhexdhexaadnimada kaarboonka, gobollada waaweyn ee wax soo saarka birta ayaa caadi ka dhigay siyaasadaha ilaalinta deegaanka cadaadiska sare, taasoo horseedaysa hoos u dhac weji leh oo ku yimid keenista alaabada birta aasaasiga ah sida billets iyo steel strip. Duruufahan awgood, alaabada aasaasiga ah ee birta dibedda ah ayaa ku fatahay suuqa gudaha. Tan waxaa laga arki karaa dhoofinta ballaaran ee dhoofinta biil Vietnamese ee Shiinaha.
Qofka ay khuseyso ee mas'uulka ka ah ururka warshadaha ayaa horey u sheegay inay dhiirigalineyso kordhinta soo dejinta alaabada aasaasiga ah sida biraha birta ah waxayna siineysaa ciyaar buuxda doorka suuqa soo dejinta ee hubinta keenista suuqa gudaha. Qoraagu wuxuu rumeysan yahay in soo dejinta wax soo saarka birta aasaasiga ah ay caadi noqon doonto mustaqbalka, taas oo sii horumarin doonta koritaanka wadarta birta waddammada laga soo dhoofiyo.
Ta labaad, faraqa qiimaha u dhexeeya suuqyada gudaha iyo dibaddaba waxay siinayaan shuruudo ku habboon dhoofinta biraha gudaha. Soo kabashada dalabka ee suuqyada dibada, qiimaha birta caalamiga ah ayaa si aad ah dib ugu soo kabtay, farqiga udhaxeeya alaabooyinka biraha gudaha ayaa sii balaadhay. Tusaale u soo qaado HRC. Waqtigan xaadirka ah, qiimaha guud ee HRC ee suuqyada Mareykanka wuxuu gaaray US $ 1,460 / ton, oo u dhiganta RMB 9,530 / ton, halka qiimaha gudaha ee HRC uu yahay kaliya 5,500 Yuan / ton. Sababtaas awgeed, dhoofinta birta ayaa ka macaash badan. Qoraagu wuxuu saadaaliyay in shirkadaha biraha ay dadajin doonaan jadwalka amarada dhoofinta ee marxaladda dambe, iyo mugga dhoofinta ee alaabada biraha ayaa sii jiri doona muddo gaaban.
Waqtigan xaadirka ah, qodobka hubin la'aanta ugu weyn ayaa ah hagaajinta siyaasadda dib-u-habeynta canshuuraha dhoofinta birta. Goorta siyaasaddan la dhaqangelinayo hadda lama go’aamin. Si kastaba ha noqotee, qoraagu wuxuu rumeysan yahay in aysan u badnayn in cashuur celinta dhoofinta birta si toos ah "loo nadiifin doono", laakiin "hagaajinta ganaaxa" laga bilaabo hadda 13% illaa 10% waxay noqon kartaa dhacdo ixtimaal sare.
Mustaqbalka, qaab-dhismeedka alaabada dhoofinta birta gudaha ayaa u sii dhowaan doonta alaabada qiimaha sare lagu daray, dhoofinta birtuna waxay geli doontaa “saddexda meelood ee sare” ee “tayo sare, qiimo sare leh, iyo mug sare” si loo daboolo saameynta qiimaha ee hagaajinta heerka cashuurta.
Gaar ahaan, mugga dhoofinta ee alaabada birta qaaska ah ayaa sii kordhin doonta. Xogta ayaa muujineysa in 53.68 milyan tan oo bir ah oo dalkeyga uu dhoofiyay sanadkii 2020, baararka iyo fiilooyinka ayaa lagu qiyaasay 12.9%, xaglaha iyo birta qaybta ayaa lagu qiyaasay 4.9%, taarikada ayaa lagu sheegay 61.9%, dhuumaha ayaa lagu tiriyaa 13.4%, iyo bir kale. noocyada lagu xisaabtamo Isugeynta ayaa gaartay 6.9%. Tan, 32.4% waxay ka tirsan yihiin bir gaar ah. Qoraagu wuxuu saadaaliyay in mustaqbalka, iyadoo la saamaynayo sixitaanka siyaasada canshuur celinta dhoofinta, saamiga alaabooyinka birta ah ee gaarka loo dhoofiyo ay sii kordhi doonaan.
Si la mid ah, soo dejinta birta ayaa muujin doonta qaab "koror deg deg ah oo ku yimid saamiga alaabooyinka aasaasiga ah ee la soo dejiyo iyo koror joogto ah oo soo dejinta biraha dhamaadka sare". Maaddaama cilmi-baarista gudaha iyo horumarinta birta-dhamaadka sare ay sii kordhayso, saamiga bir-dhamaadka sare ee biraha la soo dhoofiyo ayaa hoos u dhici kara. Shirkadaha biraha gudaha waa inay si buuxda ugu diyaar garoobaan tan, ku hagaajiyaan qaab dhismeedka wax soo saarka waqtigooda, oo ay raadsadaan fursado horumarineed oo ku saabsan qaabka isbeddelaya ee soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga.